[solved]Regedit editor မပေါ်တော့လို့ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Window Problems » [solved]Regedit editor မပေါ်တော့လို့ [Problem]
1 [solved]Regedit editor မပေါ်တော့လို့ [Problem] on 24th October 2009, 4:09 pm
စုစုပေါင်းရေးသားချက်များ : 33
ဖိုရမ် အကျိုးဆောင် ရမှတ် : 51
ကျွန်တော် computer မှာ registry editor မပေါ်တော့လို့
ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးကြပါခင်ဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
2 Re: [solved]Regedit editor မပေါ်တော့လို့ [Problem] on 24th October 2009, 7:41 pm
Run ကနေ Regedit ခေါ်လို့မရတာလား။ (အဲဒီလိုဖြစ်ရုံဆိုရင်လွယ်ပါတယ်။)
ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လို မပေါ်တာလဲ။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး မေးပါနော်။ ဒါမှ ဖြေရတဲ့သူ လွယ်ကူသွားတာပေါ့။
3 Re: [solved]Regedit editor မပေါ်တော့လို့ [Problem] on 24th October 2009, 7:52 pm
အမျိုးစားတူတဲ့စက်ကနေ Copy ကူးပြီး အစ်ကိုစက်မှာ Paste လုပ်လိုက်ပါလား
4 Re: [solved]Regedit editor မပေါ်တော့လို့ [Problem] on 24th October 2009, 8:21 pm
naungnaung wrote: ကျွန်တော် computer မှာ registry editor မပေါ်တော့လို့
ဟုတ်တယ်ဂျ .. ရှင်းရှင်းလေး ကြောပေးပါရား .. အနော်တို့လည်း တိရင်
5 Re: [solved]Regedit editor မပေါ်တော့လို့ [Problem] on 24th October 2009, 9:40 pm
Administrator Account က Disable လုပ်ထားတယ်လို့ Error တက်လား။ တေတေချာချာမေးပါဂျ။ [You must be registered and logged in to see this image.]
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးဝင်အောင် ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောမယ်နော်။ မှားရင်ခွင့်လွှတ်.
တစ်ခြားကောင်းတာလေးတွေတော့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Ultimate Washer လေးကိုညွှန်းလိုက်ချင်တယ်။ သုံးရတာလွယ်လို့ပါ။ တင်ပေးချင်ပေမဲ့ မပါခဲ့လို့နော်။ ချက်ချင်းလိုချင်ရင် ကိုဂူဂယ်ကြီးဆီက တောင်းလိုက်ပေါ့။
6 Re: [solved]Regedit editor မပေါ်တော့လို့ [Problem] on 27th October 2009, 1:24 pm
ဟုတ်ပါတယ် Administrator Account က Disable လုပ်ထား လို့ပါခင်ဗျာ
7 Re: [solved]Regedit editor မပေါ်တော့လို့ [Problem] on 27th October 2009, 1:38 pm
naungnaung wrote: ဟုတ်ပါတယ် Administrator Account က Disable လုပ်ထား လို့ပါခင်ဗျာ
Start -> Run -> gpedit.msc -> User Configuration ->
Administrative Templates -> System -> Prevent access to registry
editing tools -> Right Click Properties -> not configured ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပါ .. အဆင်ပြေပါစေ ဗျာ
8 Re: [solved]Regedit editor မပေါ်တော့လို့ [Problem] on 27th October 2009, 3:52 pm
editing tools -> Right Click Properties -> Disable
လုပ်ပေးရမှာပါခင်ဗျာ။ အဲဒီအချိန်မှာ Registry မှာဝင်ကြည့်ရင်လဲ
HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Policies\_System\_DisableRegistryTools ဆိုတဲ့ DWORD Value ကတော့ 1 ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Registry ပွင့်နေပါပြီ။
9 Re: [solved]Regedit editor မပေါ်တော့လို့ [Problem] on 27th October 2009, 7:14 pm
ဆိုတဲ့ DWORD Value ကတော့ 1 ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Registry ပွင့်နေပါပြီ။
အဟဲ ဟုတ်တယ်ဗျ . .ကျနော်နည်းနည်း ရှန်းသွားတယ် .. ဟုတ်ပါတယ် ဗျာ .. Disable လုပ်ပေးရမှာပါ .. ခုလို အမှန်ပြင်ပေးတဲ့ ကို [You must be registered and logged in to see this link.] ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.]
10 Re: [solved]Regedit editor မပေါ်တော့လို့ [Problem] on 28th October 2009, 1:23 pm
11 Re: [solved]Regedit editor မပေါ်တော့လို့ [Problem]